နာဂစ်မုန်တိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အလွန်ပြင်းထန်သည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်
အလွန်အမင်း ပြင်းထန် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (IMD စကေး)
အဆင့် ၄ (Saffir–Simpson scale)
မေ ၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ဝင်ရောက်နေသော နာဂစ်မုန်တိုင်း
ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၀၈
မေ ၃၊ ၂၀၀၈
3-minute sustained: တစ်နာရီ ၁၆၅ ကီလိုမီတာနှုန်း (တစ်နာရီ ၁၀၅ မိုင်နှုန်း)
1-minute sustained: ၂၁၅ ကီလိုမီတာနှုန်း (တစ်နာရီ ၁၃၀ မိုင်နှုန်း)
၉၆၂ mbar (hPa)၊ ၂၈.၄၁ inHg
$10 ဘီလီယံ (၂၀၀၈ USD)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။
နာဂစ်မုန်တိုင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေသို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန့်အထိ ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ကြီးမားသော ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၁၃၈,၀၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ကြရသည်။ လပွတ္တာမြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာပင် ၈၀,၀၀၀ ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီး ဘိုကလေးမြို့တွင် ၁၀,၀၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၆၂,၉၈၈,၀၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ) ကျော် ဖြစ်ကာ မြောက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းများအနက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။
၄.၁.၄ ဂရိတ် ဗြိတိန်
၄.၂ ပုဂ္ဂလိက အကူအညီများ
၅ ဆန်သိုလှောင်ရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာထိခိုက်ရေး
၇ အကူအညီ ဝေငှရေးဝိဝါဒများ
၈ အကူအညီများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားမှု အပေါ်တွင် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားသူများ၏ တုံ့ပြန်မှု
ဧပြီလ ၂၈ ရက် တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် ကမ္ဘာ့လေထုထဲ၌ လေဖိအားကြီးရာ တစ်လျှောက်မှ ၎င်း၏ အနောက်မြောက် နှင့် အရှေ့တောင်ကြား ရှိနေစဉ်အတွင်း ငြိမ်သက်လုနီးပါး ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင် JTWC မှ လေပြင်းမုန်တိုင်း အဆင့်မှ ဆိုင်ကလုန်း အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး Saffir-Simpson hurricane scale ဆာဖာ-ဆင်မ်ဆန် ဟာရီကိန်းစကေးအရ အသေးငယ်ဆုံး ဟာရီကိန်း အဆင့်နှင့် ညီမျှသည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းတွင် IMD မှ နာဂစ်မုန်တိုင်းအား လေပွေလေပြင်းမုန်တိုင်း အကြီးစားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကလုန်းသည် မုန်တိုင်း၏ ပြင်းအားပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အထောက် အကူပေးသည့် ရေနွေးများပါဝင်သော ဗဟိုတူ မျက်စိ အသွင်အပြင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် မုန်တိုင်း၏ အတွင်းဘက် အဓိကကျသော မျက်စိနံရံ အပြင်ဘက်တွင် ရှိသော မျက်စိနံရံ တစ်ခုဖြစ်သည် ဧပြီ ၂၉ ရက် အစောပိုင်းတွင် JTWC မှ ၎င်းအား ၁ နာရီ လျှင် ၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၁ နာရီ လျှင် မိုင် ၁၀၀) လေတိုက် ခတ်နှုန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် IMD မှလည်း အလွန်ပြင်းအားကြီးမည့် လေပွေမုန်တိုင်း ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
အစတွင် ၎င်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သို့မဟုတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းအား ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ ခြောက်သွေ့သော လေထုနှင့် ကျွံဝင်ခြင်း ကြောင့် ပြန့်ကျဲလာခဲ့ပြီး အားလျော့လာသည်။ အကျိုးဆက် အားဖြင့် ဗဟို တစ်ဝိုက်တွင် နက်ရှိုင်းသော အပူစီးကူးခြင်းသည် သိသိသာသာလျော့သွားခဲ့သည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းတွင် မုန်တိုင်းသည် ကမ္ဘာ့လေထုထဲ၌ လေဖိအားကြီးရာ တစ်လျှောက် အဖျားပိုင်းတစ်ဝိုက်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်မှ အရှေ့ တောင်ဘက်ဆီသို့ ရွေ့လျားမှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Dvorak technique ဒီဗိုရက်ခ် နည်းပညာသုံးကာ ဂြိုဟ်တုပြင်းအား တိုင်းတာမှုအရ လေပွေမုန်တိုင်းသည် အပူပိုင်းဒေသ မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ လျော့ကျသွားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အပူစီး ကူးခြင်း လျော့ နည်းသွားသည့်တိုင်အောင် မုန်တိုင်းမှာ ဆက်လက်၍ အားပြင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဧပြီ ၂၉ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ရုတ်တရက် မုန်တိုင်းပြင်းထန်မှုကို တိုးလာသော လေလမ်းကြောင်းများဖြင့် တားဆီး ထားသော်လည်း အပူစီးကူးခြင်း ပြန်လည် ဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သည်။
မေလ ၁ရက် တွင် အရှေ့ဘက် တည့်တည့်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးနောက်ပိုင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အမြင့်ပိုင်းသို့ နီးကပ်လာသည် နှင့်အမျှ မုန်တိုင်းရွေ့လျားမှု တိုးလာပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် လျင်မြန်စွာ ပြင်းအားကြီးလာခဲ့သည်။ အချင်း ၁၉ မီတာ (၁၂ မိုင်) ရှိသော မျက်စိနံရံမှာ ထင်ရှားမြင်သာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုအားကြီးလာခဲ့သည်။ မေလ ၂ ရက် အစောပိုင်းတွင် JWTC မှ မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းသို့ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် ၂၁၅ ကီလိုမီတာ ( တစ်နာရီလျှင် ၁၃၅ မိုင်) နှုန်းထိ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကာ အဆင့် ၄ မုန်တိုင်းအတွင်း သတ်မှတ်ခဲ့ သည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းတွင် IMD မှလည်း အမြင့်ဆုံးလေတိုက်ခတ်မှုနှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၆၅ ကီလိုမီတာ (တစ်နာရီ လျှင် ၁၀၅ မိုင်) နှုန်းထိ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ မေလ ၂ ရက် ကမ္ဘာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ခန့်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီတိုင်း ကုန်းတွင်းပိုင်း သို့ ပြင်းအားအမြင့်ဆုံးနှင့် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
အန်ဒမန် ပင်လယ် အနီးတစ်ဝိုက် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းသို့ နီးကပ်လာသည်နှင့် အမျှ တစ်ဖြည်းဖြည်းပြင်းအား လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ အနောက်မြောက်ပိုင်း လေဖိအား နည်းရပ်ဝန်း လတ္တီကျူ အလယ်အလတ် ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ လေတိုက်ခတ်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၃၀ ကီလိုမီတာ (တစ်နာ ရီလျှင် မိုင် ၈၀) နှုန်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ပိုင်းကို ကျော်လွန်ကာ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်း သွားခဲ့သည်။မေလ ၃ ရက် အစောပိုင်းတွင် IMD မှ မုန်တိုင်းအပေါ် နောက်ဆုံး ထင်မြင်ချက် ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာ- ထိုင်း နယ်စပ် အနီး အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီးနောက် လျင်မြန်စွာ အားပျော့သွားခဲ့သည်။ အသေးစား အပူပိုင်း ဒေသ မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ အားလျော့သွားပြီးနောက် JTWC မှ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပေါ် နောက်ဆုံး အကြံပေး ထင်မြင်ချက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘေးဒဏ်သင့် အခံရဆုံးနှင့် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး တိုင်း၊ ဧရာဝတီ ။
ရန်ကုန်မြို့တော်မှ သံတမန်တစ်ဦးက အဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာနသို့ ပြန်ပြောပြပါသည်။ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ တစ်ဝိုက်မှာ `စစ်မြေပြင်´ကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။ မိလ္လာပိုက်လိုင်းများ ပေါက်ထွက်မှုကြောင့် မြေပြင်တစ်ခု လုံးတွင် အညစ်အကြေးမစင်များဖြင့် ပြည့်လျှံနေပြီး စပါးပင်များအား ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိ တစ်ဦးက လည်း အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေတွင် အနေအထား နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။ " တကယ့် အခြေအနေဆိုးတစ်ရပ်ပါပဲ ။ အိမ်တွေအားလုံးနီးပါးလည်း ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။ လူတွေလည်း တကယ့်ကို ထိတ် လန့်စရာ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီဗျာ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြား ကုသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကလည်း " ဧရာဝတီ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသဟာ လေ၊ မိုး သာမကပဲ နှင့် မုန်တိုင်းလုံးကြီး ဝင်ရောက်မှုကြောင့် တော်တော် ဒဏ်ခံလိုက်ရသည် " ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယူကေ သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သော ဒေးလီး တယ်လီဂရပ်(ဖ်) မှ လည်း ဤ ဘေးဒဏ် ဆိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစားအစာ ဈေးနှုန်းကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက် ဋ္ဌာန ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Woradet Wirawekhin (th: วรเดช วีระเวคิน) (ဝိုရာဒက် ဝေရာဝီခင်) က ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ရ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်မှာ ရန်ကုန်ရှိ ထိုင်း သံအမတ်ဖြစ်သူ Bansan Bunnak (th: บรรสาน บุนนาค) (ဘန်ဆန် ဘန်နတ်) တင်ပြသော အစီရင်ခံစာအရ မြို့တော် တွင် ရှိသော အခြေအနေများသည် လည်ပတ်မှုမရှိပဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစုနှင့် ဈေးများ မှာ ပိတ်ထားရသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှလည်း ဒေသခံများသည် အခြေခံ ဝမ်းရေး ဖူလုံမှုတွင် ပို၍ ဆိုးရွားသော အခြေအနေများကို တိုး၍ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်း အစားအစာ ဈေးနှုန်းများသည် နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆ အထိ တက်ခဲ့ ကြောင်းကို အစီရင်ခံသည်။
ငွေ၊ ပစ္စည်း စသည့်ထောက်ပံ့မှု
အာဆီယံ အကဲဖြတ်ရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လျှင် ဆေးကု အလုပ်သမား ၃၀ ဦး
ဩစတြေးလျ AUD ( ဩစတြေးလျ) ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၃,၅၀၀,၀၀၀ ) နှင့် အထောက်အပံ့ ၃၁ တန်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆေးနှင့် အစားအစာ ၂၀ တန်
ဘယ်ဂျီယမ် ဖလမ်းဒါ(စ်) မှ EUR ၁၀၀,၀၀၀ နှင့် EUR ယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၇၈,၀၀၀)
ဘရူနိုင်း အကူအညီ ပစ္စည်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀
ကနေဒါ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ ၊ ကြက်ခြေနီအသင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ဘေးဒုက္ခ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှု အသင်း သည် နောက်ထပ် အကူ အညီပေးရန် အဆင်သင့် ရှိနေသည်။
တရုတ်ပြည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀, ၀၀၀ ,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ အကူအညီ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ (တစ်စီးလျှင် တန်ချိန် ၆၀ ပါဝင်သည့် အကူအညီများဖြင့် Jade Cargo (ဂျိတ် ပစ္စည်းတင်လေယာဉ် ) ကို အသုံးပြု၍ လေယာဉ် ၃ စီး အပါအဝင်)
ချက် သမ္မတနိုင်ငံ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅၄,၀၀၀
ဒိန်းမတ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၁ သန်း
ဥရောပ သမဂ္ဂ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃.၀ သန်း
ဖင်လန် EUR ယူရို ၃၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆၄ ,၀၀၀)
ပြင်သစ် ဆေး၊အစာ နှင့် ရေ ၁,၅၀၀ တန် နှင့်အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရ၇၅ ,၀၀၀
ဂျာမနီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သန်း
ဂရိ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ,၀၀၀၊ ဆေး နှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီ
ဟန်ဂေရီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀ ,၀၀၀၊ ဆေး၊ အစာ ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီ
အိန္ဒိယ အကူအညီ ပစ္စည်း ၁၇၈ တန်ကျော်- တဲ ၊ အစာ ၊ ဆေး။ ဆေးကု အလုပ်သမား ၅၀ ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့ကို ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ ဆေးရုံများ ဆောက်လုပ်ရန်ပို့ထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်း နှင့် ဆေး နှင့် အစားအစာများ
အိုင်ယာလန် EUR ယူရို ၁, ၀၀၀ ,၀၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၅၅၀,၀၀၀ )
အစ္စရေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ,၀၀၀၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှ အစားအစာ နှင့် ဆေးဝါး အထောက်အကူများ
အီတလီ EUR ယူရို ၁, ၅၀၀ ,၀၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂,၂၅၀ ,၀၀၀ )
ဂျပန် ဂျပန်ယန်း ၂၈ သန်း တန်ဖိုးရှိ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၆၇ ,၀၀၀ ) တဲ နှင့် ဂျင်နရေတာများ- ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် မှတစ်ဆင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၇၀ ,၀၀၀ ကို အကူအညီအဖြစ် အာမခံထားသည်
လာအို အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၀ ,၀၀၀ ပမာဏ ရှိ အစားအစာ
လစ်သူဧနီးယား ကြက်ခြေနီ အသင်းအတွက် လစ်သူဧနီးယား အစိုးရမှ Lt ၂၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၉၀ ,၀၀၀) လှူဒါန်းသည်။
မလေးရှား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄,၁၀၀ ,၀၀၀
မက်စီဒိုးနီးယား အမေရိကန် ဒေါ်လာ၅၀ ,၀၀၀
နယ်သာလန် EUR ယူရို ၁,၀၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၅၅၀ ,၀၀၀)
နယူးဇီလန် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ၃.၅ သန်း
နော်ဝေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၉၆ သန်း အထိ
ပါကစ္စတန် မြန်မာ အစိုးရ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် ထိခိုက်ခံရသည့် ဒေသတွင် ရွေ့လျား ဆေးရုံ စီစဉ်ပေးခြင်း
ဖိလစ်ပိုင် ဆေးကု အလုပ်သမားများ နှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃,၀၀၀ ,၀၀၀ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် အကူအညီ ပစ္စည်းများကို စီ- ၁၃၀ ဟာကျူလီ ဖြင့် သယ်ဆောင်ခြင်း
ရုရှား တန် ၈၀ ပမာဏ ရှိသော ဆေး ၊ ဂျင်နရေတာ ၊ အစာ ၊ တဲ ၊ စောင်
ဆန် မာရီနို EUR ယူရို ၃၀,၀၀၀
စင်ကာပူ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ,၀၀၀
စပိန် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရ၇၅,၀၀၀
သီရိလင်္ကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ အပါအဝင် အစားအစာ နှင့် ဆေးကု အလုပ်သမားများ အထောက်အပ့ံ
ဆွီဒင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေ သန့်စင်ခြင်း စနစ်များ
ဆွစ်ဇာလန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇၅ ,၀၀၀ (အစကနဦး)
ထိုင်ဝမ် (R.O.C ) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ,၀၀၀
ထိုင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ,၀၀၀၊ ဆေး၊ ဆေးပစ္စည်း(အစကနဦး)
တာကီ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ,၀၀၀ ၊ တူရကီ လခြမ်းနီ မှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၀,၀၀၀
ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း ဂရိတ် ဗြိတိန်ပေါင် ပေါင် ၄၅ သန်း (၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ရ ရက် ငွေလဲလှယ်နှုန်း အရ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရ၃.၅ သန်း ) အိပ်ခ်ျအမ်အက်စ် ဝက်မင်စတာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇.၂၄၅ သန်း (၁၀ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၀၈ အထိ)
ဗီယက်နမ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၀၀,၀၀၀
အီတလီ မှ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့အစည်း၏ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ယူရို ၄၆၅,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၇၃၂,၂၈၂) တန်ဖိုးရှိ အရေး ပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများဖြစ်သော တန်ချိန် ၃၀ အလေးချိန် ရှိသည့် လူနာထမ်းစင်များ၊ ဂျင်နရေတာများ နှင့် ရေသန့် စက်များ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထိုလေယာဉ်မှာ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ အနောက် နိုင်ငံများမှ ပထမဆုံး လေကြောင်းလိုင်း အကူအညီဖြစ်ပြီး ရှေ့ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှသာ အကူအညီများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အီတလီ အစိုးရသည် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ နှင့် ကုလသမဂ္ဂ မှတစ်ဆင့် ကယ်ဆယ် ရေး အေဂျင်စီများ အား ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ရန် ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ယူရို ၁၂၃,၀၀၀ ကို ကြက်ခြေနီ အသင်းမှတစ်ဆင့် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ပံ့ရန် ယူရို ၃၀၀,၀၀၀ ကို လည်းပေး အပ်ခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ မှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း (ရင်းဂစ် ၃.၂ သန်း) ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှိခဲ့သည့်အပြင် ရင်းဂစ် ၅၀၀,၀၀၀ ကိုလည်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားသည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုအား ဟာကျူလီ စီ ၁၃၀ ဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး စောင် ၅,၀၀၀ ၊ ရွက်ဖျင်တဲ ၃၀ နှင့် ရင်းဂစ် ၁၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ တီရှပ်များ ၊ ပါတိတ် လုံချည်များ ၊ ဘီစကစ်များ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်များနှင့် ဆေးဝါးများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ မာစီ မလေးရှား သည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ခတ် ခဲ့မှုကြောင့် အခြေအနေများကို စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့ဝင် လေးဦး ပါဝင်သော ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရှေးဦးစွာ ခိုလှုံနိုင်သော အဆောက်အအုံနှင့် သန့်ရှင်းသောရေရရှိရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်း ရေးနှင့် အရေးပေါ် ဆေးဝါးကုသပေးနိုင်ရေးစသည့် ကဏ္ဍများကို စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
မာစီ မလေးရှား အဖွဲ့အစည်း သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသို့ စေလွှတ်ရန် ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါးဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများမှဆရာဝန်ပေါင်း၁၈၀ကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ စတားမြန်မာ ကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ကလုံး ဒုက္ခသည် များကို ကယ်ဆယ်ရန် ရင်းဂစ် ၁.၈ သန်း စုဆောင်းရရှိခဲ့ပြီး မာစီ မလေးရှား အလုပ်အမှုဆောင် ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အာမတ် ဖေဇယ် ပါဒက်(ဇ်) ထံသို့ လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ မလေးရှားနိုင်ငံ လခြမ်းနီအသင်း (MRCS) ဘေး ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်တွင် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ MRCS မှ စောင် ၁,၀၀၀ ၊ ငါးဂါလံဆံ့ ဓာတ်ဆီပုံး ရေပုံး ၁,၀၀၀ ၊ ခြင်ထောင် ၁,၀၀၀ ၊ ဖျာ ၅၀၀ ၊ ရေဘူး ၇,၀၀၀ နှင့် ဆေးဘူး အိတ်ပေါင်း ၅၀၀ ပါဝင်သော ၂.၅ တန် ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်လာမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ၊ တန် သုံးဆယ်ရှိ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ နှင့် ဆယ့်နှစ်တန် ရှိ အစားအသောက် ပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အသင်းမှတစ်ဆင့် ပို့ပေးခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး Chaiya Sasomsap (ချိုင်ယာ ဆာဆွန်ဆပ်) မှလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရသည် ဘတ် တစ်ကုဋေ (ဒေါ်လာ ၃၁.၃ သန်း) ကျော် တန် ဖိုးရှိ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ခဲ့ပြီးကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက် အရ ဆေးဝါးအဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့နှင့် ကူးစက်ရောဂါ အမြန်လျှော့ချရေးအဖွဲ့ ၂၀ ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ Samak Sundaravej (ဆာမက်ခ် ဆွန်ဒါရေဗက်) က "မြန်မာနိုင်ငံကသာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေတပ် က စီ-၁၃၀ လေယာဉ်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စကို ကမူးရှူးထိုး အလျင် စလို ဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မေလ ၇ ရက် တွင် အထက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့များ၏ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များအား ရန်ကုန်သို့ ဆင်းသက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး သောက်သုံး ရေများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
အာမခံငွေ အများဆုံး လှူဒါန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံမှာ ယူကေ ဖြစ်ပြီး ပေါင် ၁၇ သန်း ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၃.၅ သန်းခန့်) လှူဒါန်း ခဲ့သည်။ ယူကေ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဋ္ဌာန မှလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုဋ္ဌာနမှအခြားအသင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
တော်ဝင်ရေတပ် မှလည်း (အိပ်ခ်ျအမ်အက်စ် ဝက်(စ်)မင်စတာ) အား စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒန်ဘရောင်း က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အား အပြင်းအထန် ဝေဖန်နေဆဲဖြစ်ပြီး အကူအညီများပေးရန် လေကြောင်းပို့ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
အမေရိကန်၏ ကိုယ်ပိုင်လေတပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကယ်ဆယ်ရေး အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မေလ ၅ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန် သံမှူး ရှရီဗေလာရိုဆာ က နာဂစ်မုန်တိုင်း၏ ကြမ္မာဒုက္ခဆိုးများ ကို ကြေညာခဲ့ သည်။ အမေရိကန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID မှ ဘေးဒုက္ခ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်မှု အသင်း (DART) ကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာ ဖြည့်တင်းရေး၊ ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး၊ အမိုးအကာ ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၂၅၁,၀၀၀ ကို UNICEF၊ WFP နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) သို့ ချက်ချင်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
မေ ၆ တွင် USAID မှ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့မှု များအတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်း အား အမေရိကန် ကြက်ခြေနီ အသင်းသို့ ဒေါ်လာ ၁ သန်း၊ NGO မိတ်ဖက်များ ထံသို့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း ခွဲဝေပေးအပ်ခဲ့သည်။ မေ ၁၂ ရက်တွင် USAID အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ Henrietta H. Fore (ဟန်နရီတာ အိပ်ခ်ျ ဖိုး) က အစားအသောက် ထောက်ပံ့မှု နှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး အတွက် ဒေါ်လာ ၁၃ သန်း အား ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း မှ တစ်ဆင့်ပေးအပ်ပြီးကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
မေလ ၁၂ ရက်မှ ၂၀ အထိ၊ USAID နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေးဋ္ဌာန (DOD) တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ ၃၆ DOD စီ-၁၃၀ လေယာဉ်များဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်း နီးပါး တန်ဖိုးရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်ဆယ်ရေး လူ့အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးဝေခဲ့သည်။ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများသည် 113,000 ထက်ပိုသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံသို့ အကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ DOD ဦးတည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက် များသည် ပြုစုစောင့်ရှောက်သောတုံ့ပြန်မှုပူးတွဲအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၏ လမ်းညွှန်မှု အောက်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈၊ ဇွန်လ ၂၆ အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အထောက်အပံ့သည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄၁,၁၆၉,၇၆၉ ရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုများသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သော USAID DART မှ ညွန်ကြားခဲ့သည်။
မေလ ၁၅ ရက်တွင်၊ ကုလသမဂ္ဂ [OCHA] သည် မြန်မာ HIC ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် (http://myanmar.humanitarianinfo.org)။ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သတင်းအချက်အလက်များ အလဲအလှယ် လုပ်ခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန် နှင့် ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ် သို့ တုံ့ပြန်နေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အေဂျင်စီများ အကြား ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည့် HIC သည် ရန်ကုန်ရှိ လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားသော မိတ်ဖက် အသင်းအဖွဲ့ နှင့် အခြား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသော မိတ်ဖက်များ အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးသည်။
၂၀၀၈ ၊မေလ ၈ အထိ မြန်မာပြည်သူလူထု အတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရန်ကုန်၌ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေသော အသင်း အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်များကို ကျော်လွန်၍ တိုက်ရိုက် အကူအညီ စီစဉ်ပေးနေသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ အစိုးရ ထံမှ အပြန်အလှန်နားလည်မှု ခွင့်ပြုချက် ကို ရရှိပြီး ဖြစ်သဖြင့် လှူဒါန်းမှုများအားလုံးသည် အထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအဖြစ် တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိသည်။ မြန်မာ ပြည်သူလူထု အတွက် ဖောင်ဒေးရှင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် လခြမ်းနီ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တို့သည် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၁၈၉,၀၀၀ ကို ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ချုပ်သည် နောက်ထပ် CHF ၅၀ သန်း ကို မေတ္တာရပ်ခံချက် တစ်ခုအနေဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့သည်။
ကြက်ခြေနီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Matt Cochrane (မော့(တ်) ကော့ချရင်း) က ထို ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် သေကံမရောက် သက်မပျောက်ဘဲ ကျန်ရစ်သူများသည် အလုံးစုံလိုအပ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူတို့ သည် အစားအစာ ထောက်ပံ့မှုများ အပါအဝင် သူတို့ကို ခြောက်သွေ့စွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် အရေးပေါ် နားခိုရန် အဆောက် အအုံ လိုအပ်သည်။ ရေသေရေပုပ်များသည် ငှက်ဖျားခြင် အတွက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ပေါက်ဖွား ရာဒေသ တစ်ခု ဖြစ် သောကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် စီရင်ထားသော ခြင်ထောင်များ သည် လိုအပ်သည် ဟု ၎င်းမှ ပြောကြားသည်။ ငုပ်လျှိုး နေသော သစ်ပင်ကို တိုက်မိ သောအခါ လှေဖြင့် သယ်ဆောင်နေသော ထောက်ပံ့မှုများနစ်မြုပ်ခဲ့သော ကြောင့် ကြက်ခြေ နီသည် ဆုတ်ဆိုင်းမှုများနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ လှေပေါ်ရှိလူတိုင်း အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော်လည်း ကုန်ပစ္စည်း အများစု ပျောက်ဆုံးခဲ့ သည်။ ကြက်ခြေနီ/လခြမ်းနီ ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် ဆယ်စီးသည် ဆေးကုသမှု နှင့် နားခိုရန် အဆောက်အအုံ ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်လာပြီး၊ မေလ ၁၂ တွင် ရန်ကုန်သို့ ဆင်းသက်မည်။
Trocaire (ထရိုကိန်း) သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ကတည်းက မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ဆိုင်ကလုံး နာဂစ် အပြီးတွင် ပထမဆုံး သော ဆက်သွယ်ရန် အခွင့်အလမ်း ရခဲ့သည့် အိုင်ယာလန် အကူအညီ အေဂျင်စီ ဖြစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်း မိတ်ဖက်များ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ ၊ Caritas (ကာရီတ(စ်)) အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ များမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Trocaire ထရိုကိန်း သည် များမကြာမီက တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများ မဆုံးရှုံးစေရန် အာရုံစိုက်မှု အတွက် မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည်။
ကလေးငယ်များ ကယ်ဆယ်ရေး (Save the Children) အေဂျင်စီသည် မြန်မာပြည်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုခံရသည့် အေဂျင်စီအနည်းစုမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများသည် သီးခြားဖြစ်နေသော ဧရိယာများသို့ အကူအညီ ရောက်ရှိသည့်အခါ နောက်ထပ်ရက်များ အနည်းငယ်အတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မေလ ၁၈ ရက်တွင်၊ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေး သုံးသောင်းသည် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အကယ်၍ ၎င်းတို့ဆီသို့ အစားအစာများ မရောက်ရှိပါက တစ်လ အတွင်း အစာရေစာ ငတ်ပြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမှ ယုံကြည်သည်ဟု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ - MSF သည် ရန်ကုန်၌ တနင်္လာနေ့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဆေးဝါး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ တန် ၄၀ အပြည့်ပါသော လေယာဉ်ဖြင့် ဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အကောက်ခွန်ရုံးနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းပြီးသော အခါ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း MSF ကုန်လှောင်ရုံ သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် ထိုဒေသ၌် ခန့်မှန်းခြေ အလုပ်သမား ၂၀၀ ရှိပြီး အများစုသည် ရေရှည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပြီး ထိုဒေသ အတွင်းတွင် ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။
ဝေါလ်ဗွီးရှင်း သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်း နှင့် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကူအညီ ရရှိရန် ကြိုးစားရှာဖွေနေသည်။ မြေပြင်ဝန်ထမ်းများသည် အစားအစာ၊ ရေ နှင့် အခြား အစား အစာ မဟုတ်သည့် အရာများကို ဖြန့်ဖြူးရန် လုပ်နေစဉ်တွင် WV မြန်မာမန်နေဂျာများသည် အဆိုးရွားဆုံး ထိခိုက်သည့် ဧရိယာများတွင် အလုပ်လုပ်ရန် နှင့် ပြင်ပမှ အကူအညီများ လာရောက်စေရန် အစိုးရထံမှ အတည်ပြုချက်ရရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
Avaaz.org (အားဗဇ် အဖွဲ့အစည်း) သည် ပုဂ္ဂလိကသီးခြား အလှူပစ္စည်းများ ၂၅,၀၆၂ ကျော်မှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်တွင် ကယ် ဆယ်ရေး ဦးတည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျော် မတည်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာရဟန်းများသို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝေငှခြင်းနှင့် အကူအညီ ပေးဝေခြင်း တို့ကို စစ်အစိုးရကို ရှောင်လွဲ၍ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ ဤ တစ်မူထူးခြားသော ချဉ်းကပ်နည်းကို အောင်မြင်စွာ သက်သေပြခဲ့သည်။ ၂၄-၅-၂၀၀၈ အထိ၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၅၀,၀၀၀ သည် ဘာသာရေး၊ သာသနာ့ဝန်ဆောင် ထူထောင်ခြင်းသို့ ပေးဝေခဲ့မှုကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး အခြား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ သည် ခရီး လမ်းတွင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အသစ်အတွက် တူညီသောအခြေခံတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသော အချက်အလက်- သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ခြင်း သတင်းအချက်အလက်အသစ်အတွက်တူညီသောအခြေခံတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသောအချက်အလက် - မသင့်လျော်သော လေသံ များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူခြင်းခံခဲ့ကြရပြီး (မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ပြီးနောက်အပါအဝင်) သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင်ကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် -
ဧဝံဂေလိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီ (ADRA) သည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်မှုရှိသော ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို အစားအစာ အကူအညီ ၊ရေရရှိသုံးစွဲမှု ၊ဆေးဝါးကုသရေးအကူ အညီ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကူညီရန် အခြားနည်းလမ်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီသည်။ မြန်မာဆိုင်ကလုန်းရန်ပုံငွေသို့ လျာထားသော အလှူငွေ ရရှိနိုင်သည်။
အေ့မက်ထရစ် (အေ့မက်ထရစ်ဖောင်ဒေးရှင်း) သည် ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင် ကိုစီစဉ်လိုခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကို ပေးလိုသော ကုမ္ပဏီများ၊ အုပ်စုများနှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် အွန်လိုင်း ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း တစ်ခုကို ပေးသည်။
အမေရိကန် ဂျူး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု သည် အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများကို အရေးပေါ်အထောက်အပံ့များပေးသည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
လူသားချင်းစာနာမှု အတွက် ဗိသုကာ ပုံစံ သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အိမ်များ၊ကျောင်းများ၊ ဆေးခန်းများ နှင့် အခြားအရေးပါသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို ပြည်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ လူသားချင်းစာနာမှု အတွက် ဗိသုကာ ပုံစံ⁄ မြန်မာ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
ကလေးသူငယ်များ၏ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည် တွင်အရေးပေါ် ထောက်ပံ့မှုများကို ပေးပို့သော အောက်ခြေတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဖက်များ ရှိသည်။
ကဲလ် (Care) သည် ရန်ကုန်တွင် ရုံးများ ရှိ/ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော်လည်း လူအများမှာ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းတွင် အခြားအရင်းအမြစ်များ ရှိပြီး ဆောင်ရွက်ရန် အဆင်သင့်ရှိသည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
(ချယ်(လ်) ဗီရွန်) ကော်ပိုရေးရှင်း သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပြီး၊ တစ်ဝက်မှာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ချုပ် အတွက်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဝက်မှာ တစ်ခြား အဖွဲ့အစည်း လေးခု အတွက် လျာထား သတ်မှတ်သည်- ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း၊ မာစီ ကော့(ပ်)(စ်)၊ ပက် နှင့် ကလေးသူငယ် များကို ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း တို့ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတော် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု သည် ကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ ကောင်စီ နှင့် အတူ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက်ကယ်ဆယ်ရေး သည် အောက်ခြေတွင် မြောက်မြားစွာသော အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် အစီအစဉ်များအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် မဟုတ်ပေသော ယေဘုယျ လှူဒါန်းမှုများ ရရှိနိုင်သည်။
နယ်စည်မခြား ဆရာဝန်များ⁄ Médecins Sans Frontières တွင် အောက်ခြေ ၌ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေသော အကူအညီ ပေးရေး အလုပ်သမားပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိသည်။ လှူဒါန်းမှုအတွက် ယေဘုယျ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်သည်။
ပိုးစုန်းကြူး မစ်ရှင် သည် အောက်ခြေတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများ ပါဝင်သော အုပ်စုများနှင့် အခြားသော အစိုးရမဟုတ် သော ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သည်။ လှူဒါန်းမှုများ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဒုက္ခခံစားရ သော သူများထံသို့ တိုက်ရိုက်သွားသည်။ ပိုးစုန်းကြူး မစ်ရှင်သည် ယဉ်ကျေးမှု နှိုင်းယှဉ်ခြင်း အခြေခံ သဘောတရားကို ယုံကြည်သက်ဝင်သည့်အလျောက် လက်ခံရယူမည့် သူများကို ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားခြင်း ပြုနိုင် သည့် သို့မဟုတ် ဒေသခံ ယဉ်ကျေးမှု အင်အားကို လေးစားခြင်း မရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နိုင်သော စီမံကိန်းများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို အထောက်အပံ့မပြုပေ။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်း သည် တိုက်ရိုက် အကူအညီများကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ရန်ကုန်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက စီမံခန့်ခွဲပြီး အကူအညီအတွက် လှူဒါန်း မှုများကို ကြိုဆိုသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးကမ်းခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး စီမံကိန်း များစွာကို လျာထားဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးကုသရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ၊ CHF အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့် IDE တို့ ပါဝင်သည်။
ဟန်ဂေရီ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အကူအညီ သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အကူအညီ၏ ရှာဖွေခြင်း ၊ ကယ်ဆယ်ခြင်း နှင့် ဆေးဝါးကုသရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော ကူညီကယ် ဆယ်မှုများ ၊ ရေအထူးသန့်စင်ခြင်း နှင့် သန့်စင်သော ရေ ထုတ်ပိုးခြင်း (ရေအိတ်များ) ဋ္ဌာန တို့ကို စတင်ရန်လည်း အဆင်သင့်ရှိသည်။
Hewlett Packard (ဟောလက် ပက်ကတ်) ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) မှ တစ်ဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Lutheran World Relief (လူသီရန် ကမ္ဘာ့ကယ်ဆယ်ရေး) သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ကမ္ဘာ့ဝန်ဆောင်မှု မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းတို့တွင် မြန်မာ/ဗမာ ဆိုင်ကလုန်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိသည်။
LDS ခရစ်ယာန် အသင်းတော်သည် အစားအစာ၊ စောင်များ နှင့် အခြားအထောက်အပံ့ တန်ပေါင်းများစွာ ကို ဝေငှခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
LIRNEasia (လာနီအာရှ) သည် အာရှပစိဖိတ်တွင် အခြေစိုက်သော နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး အကြံပေး အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး သိရိလင်္ကာရှိ အမရပူရ နိကာယ လင်္ကာ ဒီကရီ မှတစ်ဆင့် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာ ဖောင်ဒေးရှင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ခံရ သော နယ်မြေဧရိယာ ၉ ခုရှိ ၃၇၀၀၀ + လက်လှမ်းမမီသောလူများ (မိသားစု ရ၀၀၀ ခန့် ) ကို အစားအစာ၊ သန့် ရှင်းသော ရေ ၊ အဆောက်အအုံ နှင့် ဆေးဝါးများကို နေ့စဉ် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ကူညီပြီး အွန်လိုင်း လှူဒါန်းမှုများကို ဆန်မျူးကျွန်း ဟိုတယ်များ (အမေရိကန်/ထိုင်း) အကူအညီ ဖြင့် လက်ခံသည်။
မြန်မာကြက်ခြေနီအသင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖယ်ဒရေးရှင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်မှ တစ်ဆင့် အကူအညီ တောင်းခံ ပြီး၊ အောက်ခြေတွင် ဆောင်ရွက်သည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။ “ကျွနု်ပ်၏ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းမှုကို သို့ပေးရန်” အောက်တွင်ရှိ “မြန်မာဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်” ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကလေးငယ်များကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (Save the Children) သည် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး” ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အတိုင်းအတာ အပြည့်အဝ ကို ပေးခဲ့သည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
ဆယ်ဝါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သည် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် နေရာဒေသများတွင် လှုပ်ရှားနေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း များနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတို့နှင့် ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်ရှိသည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှုများသည် ၎င်း၏ အဖွဲ့ခွဲများရှိသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ယူကေ သို့မဟုတ် ဩစတြေးလျ သို့ထည့်ဝင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရှယ်တာဘောက်(စ်) ဩစတြေးလျ နှင့် အခြား ရိုထရီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများကူညီကြသည်။ ရှယ်တာဘောက်(စ်)သည် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 
ယူနီဆက် (ဖ်) သည် တိုင်းပြည်အတွင်းတွင်ရှိပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့များကို ပေးပြီးဖြစ်သည်။ လျာထား သော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
ယူနီတေးရီးရန်း ယူနီဗာဆယ်လစ် ဝန်ဆောင်မှု ကော်မတီ သည် ယူနီတေးရီးရန်း ယူနီဗာဆယ်လစ် အသင်းကြီး နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ကြောင့် အသက်မသေဘဲ ကျန်ရစ်သူများကို ကူညီရန် လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေ တစ်ရပ်ထူထောင်ခဲ့သည်။ UUSC ယူယူအက်စ်စီသည် ဘေးဒုက္ခကပ်များကို နည်းဗျူဟာဖြင့် တုံ့ပြန်ကူညီသည်၊ အထူးသဖြင့် အကူအညီ လိုအပ်သောသူများသည် သမားရိုးကျဖြစ်သော ကယ်ဆယ်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် သတိမမူမိခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုခြင်း ခံရသော အခါတွင် ဖြစ်သည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ ကယ်ဆယ်ရေး သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိ မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကာ မုန်တိုင်းအပြီးတွင် အကူအညီကို အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတို့အတွက် အဓိကအကူအညီကိုပေးသည်။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိနိုင်သည်။
ဝေါလ်ဗွီးရှင်း တွင် အောက်ခြေ၌ ဆောင်ရွက်နေသော ဝန်ထမ်းများရှိသည် (ဗွီဒီယိုတွင် ကြည့်ပါ)။ လျာထားသော လှူဒါန်းမှု ရရှိသည်။
[နာဂစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအုပ်စု] မြန်မာအီးဂရက်စ်သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ အပြင်းအထန် ပျက်စီးခဲ့သော မြို့နယ် ၄ ခုတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၌ လက်ရှိပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် မြန်မာ အီးဂရက်စ်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော နေရာဒေသအများအပြားတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် အာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုထားသည့် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအချို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ အီးဂရက်စ်သည် နာဂစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း အုပ်စု မြန်မာ ဟူသော အမည်အောက်တွင် ထိုဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၀၀ ခန့် သောကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းသား အချို့ သည် ထိုအလုပ်အတွက် ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်မည်ဟု တင်ပြကြပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအုပ်စုမှ သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြေဆီမြေဩဇာကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာ လက်ထက်ကတည်းက “ဆန်အိုးကြီး” ဟုသိခဲ့ကြသည်။ထုတ်လုပ်မှုမှာ မြင့်မားသည်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံသားများအတွက် မြင့်မားသော ဆန်ပမာဏကို ထောက်ပံ့ နိုင်သည့်အပြင် (အာရှစံနှုန်းများအရ) လုံလောက်သော ပိုလျှံမှုကို ဈေးကွက်သို့ ရောင်းချနိုင်သည်။ နာဂစ် မုန်တိုင်းသည် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်ဝန်းကျင်တွင် တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆန်ရှားပါးမှုနှင့် အစားအစာ အလွန် အမင်းပြတ်လပ်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ကြီး မှနေ၍ နာဂစ် မုန်တိုင်းသည် တိုင်းပြည်၏ စပါးစိုက်ခင်း ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အခြေအနေ သည် “ပျက်စီးနေသည်…… အကယ်၍ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်သည် ဆန်အလွန်အမင်း မလုံလောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါက” ဟု ၎င်းတို့မှ ထင်မြင်ကြသည်။ ဤအရာသည် ဖြစ်ပွားနေပြီးဖြစ်သော ဘေးဒုက္ခကပ်ကို ပို၍ဆိုးရွားစေသော်လည်း အကယ်၍ ဆောင်းဦးနှင့် နွေနှောင်း စပါး ရိတ်သိမ်းချိန်တို့တွင် အထွက်နှုန်းကောင်းပါက ၎င်းကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ လျှော့ချနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်မှာ ရာသီသီးနှံများမဆုံးရှုံးမီ မြန်မာလယ်သမားများအနေဖြင့် ရက်ပေါင်း ၄၀ မှ ၅၀ အထိသာ ကြားကာလအဖြစ် အခွင့်အလမ်းရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
မြန်မာ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ၊၂၀၀၈
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အကျိုးဆက်များ ခံစားနေရစဉ်အတွင်း မြန်မာ အတိုက်အခံပါတီများနှင့် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ယခင်က စီစဉ်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း (၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်) တွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းထန်ဆုံး ခံခဲ့ရသော အခြားနေရာများနှင့် ရန်ကုန် တွင် မဲပေးခြင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂၄ ရက် သို့ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက် နေ့တွင် ဆန္ဒပြသူ ၃၀ ခန့်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာ ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် စုရုံးပြီး စစ်အစိုးရ အား ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် မဲပေးခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများကို ချက်ချင်းလက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြသူများမှ "ဤအချိန်သည် နိုင်ငံရေးအတွက် အချိန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် လူများ ကို ကယ်ဆယ်ရန် အချိန်ဖြစ်သည်" ဟု ဖော်ပြသော ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန် ဝေငှခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ မှလည်း ကုလသမဂ္ဂ အား ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို မထောက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာ အတိုက်အခံ ခေါင်း ဆောင် အောင်ဆန်းစုကြည် မှလည်း ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နေစဉ် အတွင်း ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခြင်းသည် မည်သို့မျှ လက်မခံနိုင်သော လုပ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ မေလ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ ကွာလာလမ်ပူရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ ၅၀၀ ခန့် သည် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားစေခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ အား မဲဆန္ဒပေးခြင်းကို စတင်စေခဲ့ပြီးဖြစ်လင့်ကစား ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာ သတင်းအေဂျင်စီ တစ်ခုဖြစ်သော မဇ္ဈိမ မှ မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက် နေ့တွင် ကောက်ခံခဲ့ သော လူထုဆန္ဒ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၌ ဖော်ပြသည်မှာ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူများ၏ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်လုံး ကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မဲထည့်ရန် ဆန္ဒရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ရ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မှာ မည်သည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်းကို မသိကြပဲ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၎င်းတို့ ထိုအရာကို ထောက်ခံရမည် သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ရ မည်ကို မဆုံးဖြတ်ရသေးပဲရှိသည်။
ဘေးအန္တရာယ် ခံရသော သူများကို ထောက်ပံ့သော နိုင်ငံခြား အကူအညီကို စစ်အစိုးရမှ ပေးသည့် ပုံစံဖြစ်အောင် ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး နိုင်ငံတော်မှ လွှင့်ထုတ်သော ရုပ်မြင်သံကြားမှ နေ၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေသည် ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ် ရေး ပစ္စည်းများကို အခမ်းအနားများဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးနေပုံကို အဆက်မပြတ် လွှင့်ထုတ်နေသည်ဟု အေပီ သတင်းများမှ ဖော်ပြသည်။
ဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက် တစ်ပတ်မကအချိန်ကြာမြင့်သည်အထိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ၊ သို့မဟုတ် ရောဂါဘယနှင့် ငတ် မွတ်မှုတို့ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံရသော လူ ၁၀ ဦး လျှင် တစ်ယောက်သာ အကူအညီ အမျိုးအစား အချို့ကို လက်ခံရရှိ ခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ် ထက်ပိုသော နောက်ပိုင်းအထိ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လူဦးရေ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ထံသို့သာ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းပြီးနောက် ကိုးရက်အကြာအထိ စစ်အစိုးရသည် အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများကို ဗီဇာထုတ်ပေးရန် နှင့် မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံရသော နေရာဒေသသို့ ဆက်သွယ် သွားရောက်ခွင့်ကို ငြင်းဆန်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ အကူအညီ ပမာဏ အများအပြား ကို သယ်ဆောင်ရန် လေကြောင်း သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းတစ်ခုကို ဖွင့်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ သည် တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအိပ်ခ်ျ အမ် အက်စ် ဝက်(စ်) မင်စတာ ကို ထိုနေရာဒေသသို့ ပြင်သစ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်ပိုင် လေယာဉ်များ ၊ သင်္ဘောများနှင့်အတူ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အကူအညီများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားမှု အပေါ်တွင် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားသူများ၏ တုံ့ပြန်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
အသင်းဝင် ၁၀,၀၀၀ ပါဝင်သော ဗမာ ( မြန်မာ) ဆိုင်ကလုန်းဘေးအန္တရာယ် ခံစားကြသူများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများ ထောက်ပံ့ခြင်း ဟုခေါ်သည့် စာမျက်နှာသည် ၎င်း၏ အသင်းဝင်များကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းနေ့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာအနှံ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကွန်ရက် ၊ မြန်မာ ကင်(န်)ပိန်း ယူကေ ၊ မြန်မာ့ ကနေဒီ ယန် မိတ်ဆွေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကင်(န်)ပိန်း ၊ ဘာမင်နီ အင်ဖို နှင့် မရေမတွက်နိုင်သော ပြည်တွင်း မိတ်ဖက်များ၏ အကူအညီဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို တောင်းဆို သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်းနေ့ကို ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမြို့ကြီးများတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ စစ်ခေါင်းဆောင် သန်းရွှေ နှင့် စစ်အစိုးရ၏ ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ် ဒဏ်ခံရသော သူများအား အကူအညီပေးခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းအား ထင်ရှားသော တုံ့ပြန်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ နေ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြင်းထန်ဆုံးရိုက်ခတ်ခြင်း ခံရသည့် နေရာဒေသများသို့ အကူအညီများ ရောက်ရှိစေရန် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ရပ်ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် ၎င်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရမှုများကို မှတ်တမ်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် အခြားမှတ်တမ်းများကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် နာဂစ်သည် ပြင်းအား အဆင့် ၄ ရှိသော မုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် ထိုပြင်းအားဖြင့် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော မုန်တိုင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအားဖြင့် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် SSHS အက်စ်အက်စ်အိခ်ျပေါ်တွင် ၎င်းသည် အဆင့် ၄ သို့ ရောက်ရှိခဲ့သောအခါ ထိုမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် ၃ နှစ် ဆက်တိုက် တစ်ဆက်တည်းအတွက် အဆင့် ၄ မုန်တိုင်း တစ်ကြိမ် သာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း အမှတ်အသားပြုခဲ့သည် (2006's Mala ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မာလာ နှင့် စတင်ခြင်း)၊ ပြီးနောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Sidr ဆီဒါ နှင့် Gonu ဂိုနု ဖြစ်ပြီး နာဂစ်နှင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
^ India Meteorological Department (2008). "Deep Depression over southeast and adjoining Southwest Bay of Bengal". https://www.webcitation.org/5XOeOTJ1k?url=http://www.imd.ernet.in/section/nhac/dynamic/cwind.htm. Retrieved 2008-05-02.
↑ "80,000 dead in one Burma province" Archived 17 April 2009 at the Wayback Machine., The Australian,9May 2008
↑ "Cyclone Nargis embodied the ‘perfect storm’"၊ NBC News၊ 8 May 2008။ 23 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Natural catastrophes and man-made disasters in 2008: North America and Asia suffer heavy losses။ Swiss Reinsurance Company Ltd (21 January 2009)။ 16 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Burma death toll jumps to 78,000"၊ BBC News၊ 16 May 2008။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Aid trickles into Burma, but toll 'could reach 1 million if disease set in"၊ London: Timesonline.co.uk။ 31 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Asian bloc to handle Burma aid"၊ Toronto Star၊ 19 May 2008။ 19 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နာဂစ်မုန်တိုင်း&oldid=662312" မှ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။